Inhloko yeWaikato Chamber of Commerce inxusa uhulumeni ukuthi angaveli kulomsebenzi olungiselelwe ifosholo
UKUTHUNYELWA KWAMAHHALA KUYO YONKE IMIKHIQIZO YASEBUSHNELL
Uchungechunge Lokumiswa Komnyango
Uchungechunge lwe-European Door Stopper
I-Ivory White Door Stopper Series
I-Space Aluminium Quality Door Stop Series
Insimbi Engagqwali Isivalo Series
Uchungechunge lwe-Zinc Alloy Door Guard
I-Zinc Alloy Door Stopper Series
I-Zinc Alloy Door Stops Series
I-Zinc Alloy Floor Door Stopper Series
Ulenga Wheel Uchungechunge
Chinese Style Hook Uchungechunge
Uchungechunge lwe-European Hook
UDon Good, umqondisi omkhulu weWaikato Chamber of Commerce, ugxeke uhulumeni ngoba izwe lintula amaphrojekthi angashaywa ngamafosholo ngokushesha eWaikato, ngenkathi osonkontileka bezempi belinde ukuthi imisebenzi ivunyelwe.
Uhulumeni akazange amemezele iningi lamaphrojekthi wokulungiselela amafosholo omhlaba. Kodwa-ke, uMkhandlu Wedolobha laseWaikato wancoma amaphrojekthi angama-23 kuhulumeni omkhulu ngo-Ephreli, isamba esingu-US $ 2.8 billion.
Cishe kube yizigidi ezingama- $ 150 ezibekelwe iWaikato, okubandakanya amaphrojekthi alungele amafosholo njengokuthuthukiswa kweHamilton Gardens nengqalasizinda yamabhayisikili kulo lonke idolobha.
Encwadini ayibhalela amalungu eChamber of Commerce, uGoode uthe uhulumeni ubambezela ukumenyezelwa kwalezi zinhlelo futhi ulahlekelwe indlela yakhe kwezokuphatha ukunweba iphrojekthi yokwandisa iCambridge iye ePiarrell kuWaikato Expressway naseSouth Link.
“Wenzani uhulumeni ngomkhandlu wedolobha laseHamilton, umkhandlu wesifunda saseWaipa kanye nawo wonke amaphrojekthi amakhulu okulungiselela amafulethi ahlongozwe ngumkhandlu wesifunda saseWaikato ezinyangeni ezinhlanu ezedlule?
"Akukholakali ukuthi babeyisiqubulo nje semfundiso yenkolo ngaleso sikhathi, sinikeza ithuba abaphathi bezimali ababiza kakhulu baseWellington ukuthi benze imibiko yokuma emnyango, manje eqoqa uthuli emashalofini ezinhlangano zikahulumeni."
“Siyakuqonda ukuzidela okudingekayo ukwamukela iCovid-19. Siyingxenye yeqembu lezigidi ezi-5 futhi sizidele. Kepha izinyanga eziyisihlanu zokwakha uhlelo lokusiza umnotho uvuselele zinde kakhulu.
“Indlela yokulungisa ifosholo ilula. Sivalelwe, futhi abaholi bethu kudingeka batshale imali kumaphrojekthi ahlinzeka ngengqalasizinda yezizukulwane eziningi, eletha imisebenzi kubantu abaningi.
“Lokhu kuzonikeza abantu isiqiniseko. Imali izofaka ukheshi emnothweni, futhi imali esesandleni izonikeza abantu ukuphepha. Ngokuqiniseka nokuphepha, unganika abantu ukuzethemba.
“Siyajabula ukuthi kutholakala ukuthi asilona iqiniso. Kuyasijabulisa ukuzwa isimemezelo esibalulekile kusasa sokuthi izimali zamaphrojekthi amakhulu zivunyelwe. Izinkampani zifuna ukusebenza. ”
"Isifunda saseWaikato besilokhu sifuna ukuzethemba ngokuzayo ukuze sikwazi ukusilela emuva ngo-2020. Manje sicela abaholi bethu bahole: Bangasiphoxi."
Yize amathemba kaGood emabi, imiphumela yocwaningo lomkhakha wezokwakha lowezi-2020 ikhombisa ukuthi “ngeSivumelwano Sokwakha”, iSanshui Reform kanye neNew Zealand Infrastructure Commission sebeqalile ukuba nomthelela omuhle ekusimamiseni ipayipi lomsebenzi, futhi imboni ibona kukhanya ikusasa.
Izinkontileka zomphakathi eziguquguqukayo zithatha izinyathelo eziningana zokubhekana nezinselelo zabo zesikhashana zokungena kwemali, ukungaqiniseki ezinkambisweni zomsebenzi, nezinkontileka ezikhanseliwe / ezeluliwe.
Njengoba ohulumeni basekhaya nabaphakathi benza i-75% yamakhasimende embonini yezokwakha, osonkontileka balindele ukuthi uhlelo lukahulumeni lwamuva lokuthuthukisa iNew Zealand lube nomthelela omuhle, ama-69% abo alindele umthelela omuhle eminyakeni emithathu, futhi izimemezelo ezilungile zengqalasizinda zizoba ne-Helps ukulinganisela ukuncishiswa kwemali esetshenziswa ohulumeni basekhaya ngenxa yomthelela weCovid-19 kusabelomali.
UPeter Silcock, oyiChief Executive Officer yeNew Zealand Civil Construction Contractors, uthe: "Naphezu kwesimo esinzima somnotho, osonkontileka abaningi bayazethemba ukuqina kwabo futhi banethemba lokugcina nokugcina abasebenzi babo be-Employ ngaphansi kwezimo ezithile."
"Osonkontileka kuzodingeka bathathe izinyathelo zokuqinisekisa ukuthi ibhizinisi labo liyakwazi ukumelana nokwehliswa kwesikhashana kwesibalo somsebenzi ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, ngaphambi kwamaphrojekthi ahlelelwe iminyaka emihlanu ezayo."